Somali-Norwegian ka soo barbar dagaalamay Kooxda Daacish oo la xukumay. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Somali-Norwegian ka soo barbar dagaalamay Kooxda Daacish oo la xukumay.
On Jan 20, 2016 Last updated Jan 20, 2016
Maxkamadda Rafcaanka Borgarting ee dalka Norway waaxa la soo taagay rag asal ahaan ka soo jeeda dalalka Somalia iyo Albania, kuwaasi oo la sheegay inuu ku biireen, kana soo barbar dagaalameen Dagaalamayaasha Daacish ee ku sugan dalka Syria.
Warbaahinta dalka Norway ayaa sheegtay in Labada Eedeysane lagu kala xukumay Xabsi u dhexeeya 4 sanno ilaa 5 sanno.
Ninka Somali-Norwegian-ka oo lagu magacaabo Jabriil Cabdi Bashiir oo 31-jir ah waxaa lagu xukumay Xabsi Afar sanno iyo 6 bilood.
Sidoo kale, Labo nin oo Walaalo ah, oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Albania, ayaa iyagana lagu soo oogay inay taageeri jireen Kooxda Daacish.
Valon Avdyli oo 29-jir ah waxaa lagu xukumay 4 sanno iyo 9 bilood, iyadoo Walaalkiisa ka yar oo 26 jir horey loogu xukumay 8 bilood, kadib, markii uu ku xadgudbay Sharciga Hubka ee dalka Norway iyo inuu ku fashilmay inuu Kooxda Daacish u gudbiyo Dhar iyo qalabka lagu dagaalamo.
Dhinaca kale, Saddexda Eedeysane waxaa bishii May ee sannadkii hore la soo taagay Maxkamad, waxayna dhamaan Eedeysanayaasha beeniyey Dacwadihii lagu soo oogay
Xukunnadda waxa uu calaamad u yahay inay markii ugu horreysay Maxkamadda Sare ee Norway go’aan ka qaadatay Kiis la xiriira in lagu biiro Urur Argagixiso, iyadoo Sharciga cusub ee Xukunnadda noocaasi ah fasaxayo in Eedeysane kasta lagu xukumo Xabsi ugu yaraan 6 sanno ah.
Kenyan la sheegay inay ka tirsanaayeen Alshabaab oo lagu dilay Malindi.
Madaxweynaha: “Amniga waa tiirka aasaaska u ah horumarka iyo dib u dhiska Soomaaliya”